Nyochaa: 'Black Water: Abyss' Flounders In The Dark - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Nyochaa: 'Mmiri Ojii: Abyss' Flounders In The Dark
Nyochaa: 'Mmiri Ojii: Abyss' Flounders In The Dark
by Jekọb Davison August 6, 2020
by Jekọb Davison August 6, 2020 871 echiche
E nwere ihe dị ihe banyere anụmanụ ndị na-eri anụ na ọdachi ndị na-emere onwe ha nke na-emetụta akwara na ụbụrụ psyche. Umu Asa, anyi agabala na ebe anyi na echeghi ihe di n’elu anyi n’elu nri anyi na - ari anyi. Ma n'agbanyeghị nke ahụ, ụjọ ahụ ka dị. Nke kọwakwara ihe kpatara ndụ ọgụ ụmụ anụmanụ ji bụrụ akụkọ dị egwu. Oge ọ bụla anụ ọhịa bea ma ọ bụ azụ shark wakporo mmadụ, nke ahụ bụ akụkọ. Dị ka ọ dị mgbe n'afọ 2003 mgbe mmadụ atọ na-eto eto gara n'ọzara Northern Australia wee hụ ka agụ iyi na-emebi iwu nọchibidoro ya. Nke a bụ ihe ndabere maka ihe nkiri 2007, Mmiri Oji. Ugbu a, ihe dị ka afọ 13 ka e mesịrị, otu ihe na-ebilite site na mpụga ahụ Mmiri Oji: Abis.
N'ịlaghachi na Northern Australia, Jennifer (Jessica McNamee) bụ enyi ya nwoke obi ọjọọ Eric (Luke Mitchell) na ndị enyi Yolanda, Viktor, na Cash (Amali Golden, Benjamin Hoetjes, Anthony J. Sharpe) kpebiri ịga spelunking na ozara. Na-agbada n'ime usoro ọgba ọhụụ ọhụụ. Dị ka ihe ndabara, ọ ga-eme, oke ifufe dakwasị ndị ọgba ahụ ma mechie ha. Ma ọ bụrụ na nke ahụ ezughi oke, ha nwere ndị ọbịa agụụ na-agụ agụụ nke agụụ na-agụ.
Foto site na IMDB
Onye isi nduzi Andrew Traucki duziri akụkọ izizi gbasara agụ iyi na Mmiri Oji ma na-arụ ọrụ na yiri anụmanụ dịpụrụ adịpụ nke Oké Osimiri na-egosi ndị na-egwu mmiri na sharks. Ugbu a, na-alọghachi naanị ya, ọ laghachiri na mgbọrọgwụ ya site na usoro ime mmụọ a. O di nwute na agbanyeghi ikike nke nhazi na nkata na egwu ebighi ebi nke agu, ihe nkiri a adighi nma. Na n'ihi nke ndị dị otú ahụ ihe nkiri dị ka Ikpa na 47 Mita gbadata nke jisiri ike bulie osisi elu dị ka ọkwa ha nwere ike ịga. Ya mere, mgbe Mmiri ojii: Abis nwere okwu na-adọrọ mmasị nke na-ekwe nkwa ọtụtụ ihe egwu, ihe na egwu nke ndị iro agụ iyi na-eche ihu.
Isi ihe na-elekwasị anya nke nkata ahụ na-adakwasị ndị na-agụ akụkọ ọtụtụ nsogbu na ịlụ ọgụ ka ha na-agba mbọ ịlanarị. Kedu nke dị mma iji mejupụta omimi omimi ha karịa, mana n'otu oge ahụ dabara na opera ncha dị ka ihe nkiri. Dị ka mgbake nke Viktor na ọrịa kansa na ụfọdụ na-agbagọ agbagọ ma na-atụgharị mmekọrịta na mkparịta ụka. Ka anyị chee eziokwu ihu, anyị nọ ebe a maka nnukwu anụ, na nke a, ndị crocs. Site n'ụzọ e si ese ihe nkiri, anyị anaghị enweta ọtụtụ n'ime ha dị ka anyị ga-achọ ma ụjọ ahụ anaghị arụ ọrụ nke ọma.
Offọdụ n'ime ihe nkiri kachasị amasị m na fim ahụ bụ n'ezie na mbido n'oge mmalite nke ụdị. Otu di na nwunye na-eme njem nlegharị anya na Japan (Louis Toshio Okada, Rumi Kikuchi) na-arụrịta ụka na mpụga ahụ mgbe ha dabara na mberede n'ime usoro ọgba croc dị n'okpuru. Ọ na - eme maka ezigbo ịgba adrenaline n'agbanyeghị na ọ dị mkpụmkpụ. Ihe nkiri ahụ na-ejikwa jaws dị ka credo nke pere mpe ị hụrụ, ọ na-atụ ụjọ karị. Oge ụfọdụ dị egwu karị bụ mgbe ihe odide ga-agagharị na mmiri ahụ, amaghị mgbe otu n'ime anụ ọhịa ndị ahụ ga-awakpo.
Ọ bụghị ihe na-emebi emebi n'ezie, mana ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ maka akụkọ dị ngwa banyere spelunkers vs crocodiles n'okpuruala, nke a bụ maka gị.
Mmiri Oji: Abis akụda VOD na August 7th, 2020